Paleocene fauna: njirimara na evolushọn | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ime oge Ogechi anyị na-ezute Oge Paleocene nke gbasara site n'ihe dị ka nde 66 afọ gara aga ruo ihe dị ka nde 56 afọ gara aga. Ọ dị n'ime oge Paleogene ma ama maka ụfọdụ mgbanwe mgbanwe dị na mbara ụwa. Na Paleocene fauna Ihe e jiri mara ya bụ mkpochapụ nke dinosaurs na ọnọdụ ọjọọ. N’oge a, e guzobere ọnọdụ ụfọdụ ka ụwa wee jitụkwuo ike ma nwekwaa ike itolite ọtụtụ osisi na anụmanụ.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị gbasara njirimara niile na mbido nke ụmụ anụmanụ Paleocene.
1 Oge Paleocene
2 Ihe ndi di ndu na ahihia
3.3 Paleocene fauna: azụ na mammals
N’oge ahụ ụwa na-arụsi ọrụ ike site na mbara ala. Igwe mmiri a na-aga n'ihu na-ekewapụ nnukwu kọntinent a maara dị ka Pangea na kọntinent ndị gbanwere gaa ebe ha nọ taa.
Banyere ụdị dị iche iche nke anụmanụ, ọ bụ ihe dịka oge nke nwere ọtụtụ anụmanụ na osisi. Ìgwè dị iche iche nke lanarịrị ikpochapu nke oge gara aga jisiri ike imeghari ọnọdụ dị iche iche gburugburu ebe obibi. Site na ebe a, ha gbasara, na-eburu ebe buru ibu ma na-abanye n'ụdị na usoro ọmụmụ.
Nyere ufiop geological ọrụ oge a e ji, anyị nwere ụfọdụ tectonic efere na malitere ha ije n'oge Ugochukwu ma ha mechara biri na ọnọdụ ndị ọzọ na Paleocene niile. Ihu igwe mekwara ụfọdụ okpomọkụ dị elu na Ha kpatara oke mgbanwe na mmepe nke ụdị ihe dị ndụ na ebe nkesa na ebe obibi ha.
Ihe ndi di ndu na ahihia
Ebe ọ bụ na Paleocene malitere ozugbo usoro mkpochapụ oke na ọkwa ụwa, ọtụtụ ụdị ga-adị ndụ ma gbanwee ọnọdụ ọhụrụ. Nnukwu oke mkpochapụ a mere ka ụdị ndụ ndị dị ndụ nwegasịa ma na mpaghara ma na mbido. Ọtụtụ n'ime ụdị ndị a dị ndụ ghọrọ ụdị ọhụrụ kachasị na mbara ala.
Usoro mkpochapu nke a bụ nke a mụrụ na nke a ghọtara na akụkọ ntolite ma mara ya mbibi nke Cretaceous na Tertiary. Ọ bụ ebe a ka ọtụtụ anụmanụ ndị dị na mbara ụwa kpochapụrụ na ndị dinosaur pụtara.
Banyere osisi nke Paleocene anyị na-achọta ọtụtụ osisi nke ka dị taa. Fọdụ osisi ndị topụtara n’oge a bụ nkwụ, conif, na cacti. Achọtala nke a site na ndekọ ndekọ ndị ọkachamara na-achịkọta. E nwekwara ebe fern bụ osisi hiri nne nke ukwuu.
Ebe ọ bụ na ihu igwe na-agbasokarị n'oge Paleocene dị ọkụ ma dị mmiri mmiri kwadoro mmepe nke nnukwu mpaghara nke ahịhịa nwere ahịhịa na ahịhịa ndụ ndị a na-ahụkarị n'ọhịa na n'oké ọhịa ndị na-adịghị mma. Mmepe a nke usoro ihe omimi nke okpomoku nke juputara na iru mmiri, okpomoku di oku na ahihia buru ibu nwere ike ikwe ka odi ohuru.
Conifers jupụtara ebe niile ebe okpomọkụ dị ala. Ihe ndị a kpọgidere ruo n'ógbè ndị ahụ dị n'akụkụ okporo osisi ndị ahụ. Osisi ọzọ nke gara n'ihu na ntụgharị ha bụ angiosperms. A na-edebe osisi ndị a taa.
Banyere anụmanụ nke Paleocene, anyị nwere ọtụtụ anụmanụ nke ga - emeri mbibi mbibi nke Cretaceous. Anụmanụ ndị nwere ike lanarị ha nwere ohere ịgbasawanye site na mba dị iche iche gburugburu ụwa. Ha jiri ohere ahụ mee ihe karịsịa na dinosaurs nọrịị ebe ahụ, ndị a bụ ndị kasị ukwuu na-eri ibe ha na ụwa dum. Anụmanụ ndị a na-eri anụ na-asọ mpi maka akụrụngwa gburugburu ebe obibi, yabụ ọnụnọ nke dinosaurs, ịgbasa na ọrụ nke ókèala ahụ dị mfe karị.
N'ime ìgwè anụmanụ ndị nwere anụmanụ Paleocene ma gbasaa n'ụzọ dị ukwuu bụ mammals, nnụnụ, na-akpụ akpụ na azụ. Anyị ga-enyocha nke ọ bụla n'ime ha.
Anu ana-ankpu bu otu anumanu ndi lanariri na ndọtị ya ma ndi onwere ihu igwe ha nwere n’oge a. Ọnọdụ gburugburu ebe obibi nyere ha ohere ịgbasa n'ọtụtụ ebe dabara adaba maka nlanarị ha.
N’etiti anụ na-akpụ akpụ ọtụtụ campsosaurs jupụtara, nke bi na ebe obibi mmiri. Ahụ ha yiri nke nnukwu ngwere ma ha nwere ọdụ ogologo nke nwere obere aka 4 dị obere. Fọdụ n'ime ụdị ihe a nwere ike iru ihe ruru mita abụọ n'ogologo ma ezé ha nwere ike ịchụ nta anụ ha. Agwọ na nduru nwekwara mmepe ha n’oge a.
Nnụnụ Paleocene bi na mbara ala a ma gbasaa n'ihi mmụba nke okpomọkụ na mpaghara ebe okpomọkụ. Nnụnụ nke genus Gastornis, nke a maara dị ka nnụnụ ụjọHa buru ibu mana ha enweghị ike efe. Characteristicdị njirimara nke ụdị a bụ na ha nwere nnukwu onu okuko nke nwere udidi siri ike. Omume ha bụ anụ na-eri anụ ma ha na-atụ ụjọ na-eri ọtụtụ anụmanụ.
N'ime oge a niile, ọtụtụ ụdị nnụnụ ndị na-adịgide taa na-etolite ma pụta n'ihi ọnọdụ gburugburu ebe obibi. Anyị na-ahụ n'etiti ìgwè nnụnụ ndị a nnụnnụ mmiri, ikwiikwii, na kpalakwukwu na ọbọgwụ, n'etiti ndị ọzọ.
Paleocene fauna: azụ na mammals
Na oge mkpochapu nke Cretaceous, otu akụkụ buru ibu nke mmiri na mmiri na dinosaurs niile mmiri funahụrụ. Nke a dugara obere asọmpi n'ọhịa mmiri wee mee ka sharks gbasaa ghọọ ndị ọhụrụ na-eri anụ. Ọtụtụ azụ ndị dịgidere taa mere ka ha pụta n’oge a.
Banyere mammals, ọ bụ otu kachasị nwee ihe ịga nke ọma n'ime ụmụ anụmanụ Paleocene. Ihe mmuta, monotremes na marsupials putara. Plasenta ya bụ otu ụmụ anụmanụ na-enye ara ara onye njirimara ya bụ mmepe nwa ebu n'afọ n'ime nne. A na-eme ka nkwukọrịta dị n'etiti ha nwee ekele site na eriri nwa na Plasenta. N'ime otu a òké, lemurs na primates, na ndị ọzọ.
Marsupials bu otu ndi ozo nke nwanyi na - enye udiri akpa nke amara aha ya. N'ebe a anyị hụrụ kangaroos na ọ nweghị ọtụtụ ndị nnọchi anya na Paleocene. N’ikpeazụ, monotremes bụ anụmanụ ndị njirimara ha yiri anụ na-akpụ akpụ na nnụnụ. Ahụ ha kpuchie na veel mana ha na-acha ovipa. Lee platypus na echidna.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere anụmanụ nke Paleocene.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Paleocene fauna